Semalt: Zvichida Zvirongwa Zvisingadiwi Uye Nzira Yokudzivisa Sei
Muchikamu chechinyorwa ichi, Julia Vashneva, Semalt Mutungamiri Mukuru weVatengi vanobudirira, anoudza kuti mapurogiramu asina kudikanwa anobata sei kombiyuta yako uye kuti ungadzivisa sei kuisa PUPs. Zvakajeka kubva muzita kuti mapurogiramu asina kudiwa ndeaya mapurogiramu, software kana zvidzidzo zvatisingadi kuisa mumakombiyuta edu, mafoni, mahwendefa nemamwe magetsi. Vanopinda muhurongwa hwenyu uye vanogona kukuvadza mafaira ako mumaminitsi. Pane nzira mbiri dzepadpware dzinopararira munofaira yako - what is the best free software for logo design. Chokutanga pane zvose, ivo vanosungirirwa nevatadziri vepurogiramu uye vanoiswa panzvimbo yako. Chechipiri, iwe unodzikanganwira zvisingabviri kubva pawebsite, uye zvino zvinokonzera matambudziko kwauri. Zvirongwa zvingave zvisina kudiwa zvinogona kuiswa muhurongwa hwako pachako uye dzoba ruzivo rwako pachako pasina ruzivo rwako.
Zvirongwa zvingave zvisina kudiwa zvinowanikwa pachinzvimbo chako muchimiro che toolbars nevashandisi zviri nyore kuziva. Zvisinei, mamwe maitiro ezvirongwa haagoni kuonekwa uye anogona kukuvadza Windows yako Taskbar Manager pane zvakawanda. Rega ndiuye pano kuti ndikuudze kuti PUPs ndeye spyware kana malware. Izvo zvinoshambadza uye keyloggers zvinogona kuuraya zvirongwa zvako. Saka, zvakanaka kuisa antivirus software nokukurumidza. Kana vachidzivirira kuiswa kwako, unofanira kutangazve kombiyuta yako kana kuisa imwe sangano rekushandisa. Zvirongwa zvingave zvisingakanganwi zvinogona kuderedza basa rako rekushandisa uye rinogona kukanganisa mararamiro ako.
Bvisa Zvirongwa Zvisina Kudiwa
Kuti ubvise mapurogiramu angave asingadiwi, unofanira kuzarura mararamiro ekufuratira uye enda kune zvaunogona kuita. Danho rinotevera nderokutarisira kuwedzera kwako, uye izvozvo zvinogona kuitwa Ita ini pano kuti ndikuudze iwe kuti dzimwe shanduro dzine maitiro akasiyana-siyana akasiyana-siyana.Kana iwe usinganzwisisi nzira yekugadzirisa zvirongwa, zviri nani kutsvaka rubatsiro rwevanyanzvi. seNET uye Visual C ++ Distribution Framework. Zvakakosha kubvisa mapurogiramu aya uye mapurogiramu ose asina kufanira kubva pane yako kambani nokukurumidza.
Chengetedza PUPs kubva pakuisa
Zvinotarisirwa kudzivirira mapurogiramu angangodaro asina kudiwa kubva pakuisa pakombiyuta yako uye foni. Nokuda kweizvi, iwe unofanira kuenda kuIxplore Method Method uye shandisa chirongwa chinonzi antivirus nokukurumidza. Iwe unofanira kugara uchitsvaga freeware kubva kune mawebsite akachengeteka uye echokwadi uye enda kumusimboti wokugadzirisa tsika. Pano iwe haufaniri kuvhara pfupa Chinodiwa. Chokutanga pane zvose, iwe unofanira kuverenga mazano ayo uye mazano okuti uve nechinangwa cheicho chiri kupiwa. Kana tsika yekuisa tsika yapera, danho rinotevera ndokuisa mapurogiramu maviri antivirus zvakachengeteka.
Nhamba yakawanda yevashandi vanonyengedza avo vanotambudzwa kuburikidza neAkubvuma uye Kuramba kusarudzwa. Ndicho chikonzero iwe usingafaniri kumbomira pane mabhota asina ruzivo rwako. Tinokukurudzira zvikuru kuti uverenge software yepamusoro uye zvigadzirwa zvemhizha usati wavhara paIndaneti.
Pakupedzisira, tinoda kutaura kuti zvipfeko zvisingabhadharwi zvakanaka zvechokwadi. Asi iwe haufaniri kuaisa kubva kunzvimbo dzisingazivikanwe kana dzisina kujaira. Chimwe chiitiko chatakacherechedza ndechekuti rimwe shanduro uye vashanduri vepurogiramu vanotanga mapurogiramu avo nevechitatu-phishing phishing ads. Tinokukurudzira kuti ugare kure nezvinhu izvi kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwekuchengeteka kwako nekuchengeteka.